Social Media: Ndụmọdụ 3 Ka Mma soro ndị ahịa gị | Martech Zone
Social Media: Ndụmọdụ 3 Ka Mma soro ndị ahịa gị
Na Mọnde, Nọmba 19, 2019 Na Mọnde, Nọmba 19, 2019 Thibaud Clement
Na isi, usoro mgbasa ozi bụ ụzọ abụọ, ebe ụdị nwere ike ịgafe ahịa azụmaahịa ọdịnala, ma soro ndị ahịa ha soro ịzụlite iguzosi ike n'ihe n'ezie. Ndị a bụ ndụmọdụ atọ ụlọ ọrụ gị nwere ike iji jikọta ndị ahịa gị nke ọma na mgbasa ozi mmekọrịta.
Ndụmọdụ # 1: Melite Sistem Tohapụ Ichefula Ihe ngosi
Ọ bụrụ na ị na-ebipụta ọdịnaya dị elu na akaụntụ mgbasa ozi mmekọrịta gị ma na-etolite ndị na-ege gị ntị nke ọma, ohere ọ bụ bụ na ndị na-eso ụzọ gị na ndị ahịa gị ga-esoro akara gị. Nke a bụ usoro omume ọma ịchọrọ ịkwado, iji nweta ndị nnọchi anya mmụọ, ndị, n'aka nke ha, ga-agbasa ọdịnaya gị site n'okwu ọnụ ma nye aka na uto nke ndị na-ege gị ntị.
Provenzọ a nwapụtara iji mezuo nke a bụ site na nzaghachi, site na ijide n'aka na ị maara ma zaghachi ngwa ngwa na nkọwa niile, ozi na ozi nzuzo zigara gị. Mkparịta ụka ọ bụla na-anọchi anya ohere iji gosipụta otu ị si eche banyere ndị na-ege gị ntị, site na ịkele nzaghachi na ị na-ege ntị / na-eme ihe n'echeghị echiche ire ụtọ.
Nke a bụ ihe ị ga - enweta site na ijikọ akaụntụ mgbasa ozi mmekọrịta gị na ụlọ ọrụ / ngwanrọ nke ndị ahịa gị, na-eji ozi email zuru oke na sistemụ mgbasa ozi nke ọtụtụ netwọkụ mmekọrịta na-enye ma ọ bụ iji usoro ntinye aka ndị na-ege ntị dịka Loomly.
Ihe kpatara nke a bụ: Dịka ụkpụrụ nke nnabata, ndị mmadụ na-emeghachi omume na ihe dị mma site na omume ọzọ dị mma, na-eme ka o kwe omume na ika gị wulite mmekọrịta na mgbanwe na-aga n'ihu.
Ndụmọdụ # 2: Wulite Obodo Ahịa
Nọ na soshal midia na akaụntụ ndị nwere ike ịnweta bụ ntọala nke usoro ịzụ ahịa dijitalụ na-aga nke ọma, ebe ọ na-enye ike ka akara gị na-enwu ma na-eme ka elu nke olulu gị na ndị ahịa nwere ike ịzụ ahịa.
Otu ohere iwere ihe n'ọzọ nke ọzọ bụ iji mee ka mmekọrịta mmadụ na ibe ya jupụta n'okporo ụzọ site na imepụta - na ịchekwa - obodo mechiri emechi maka ndị ahịa gị dị ka ọmụmaatụ, na otu Facebook.
Approachzọ a na-enye gị ohere ịgafe ọdịdị azụmahịa nke mmekọrịta gị na ndị ahịa ma nye ha ohere ijikọ na ndị ọzọ na-ekerịta ụdị ọdịmma ahụ - iji mechie akara gị na / ma ọ bụ ngwaahịa gị n'ụzọ na-enweghị atụ.
N'aka nke ya, nke a na-enye gị ohere ịkwụ ndị otu na-arụ ọrụ n'otu n'otu ụgwọ ọrụ ndị a na-adịghị ahụ anya, dị ka ịbanye n'ime mkpokọta ọhụrụ, mbido ohere ịre ahịa nkeonwe na ịkpọ oku ka naanị ihe omume ụlọ ọrụ.
Ihe kpatara nke a bụ: Mepụta mmetụta nke ịbụ onye na-arịọ arịrịọ maka mkpa mmadụ nke ndị ahịa gị ga-abụ onye a nabatara na otu ma na-ebute njikọ mmetụta uche n'etiti ndị ahịa gị na akara gị.
ND #MỌD # #3: Nyochaa gị Brand N'ebe nile Online
Ka ị na-etolite, ọ ga-abụrịrị na ọ ga-abụrịrị na ndị ahịa gị na-agwa gị ihe gbasara ika gị na ebe ị nweghị ma ọ bụ na-achịkwa ya. Agbanyeghị, na ndị ahịa anaghị ajụ gị ajụjụ ozugbo, ọ pụtaghị na ị gaghị aza ya, ọkachasị gbasara akara gị.
Site na ịtọlite ​​anya na aha akara gị, ma ọ bụ jiri Alert Google dị mfe (na n'efu) ma ọ bụ jiri ihe ndozi dị ka Mention, a ga-amara gị ọkwa oge ọbụla mmadụ na ịntanetị na-eji aha akara gị.
Nke a bụ ohere pụrụ iche iji sonyere mkparịta ụka dị mkpa ma nyefee ya oke site na inye nkwado - ma ọ bụ ọbụna ndụmọdụ - ebe na mgbe ndị ahịa na ndị ahịa dị adị nwere ike ha agaghị atụ anya ya.
Ihe kpatara nke a bụ: Mmetụta nke ihe ijuanya bụ otu n'ime ihe mmetụta mmetụta uche kachasị ike mmadụ nwere ike ịnweta. Mgbe ị jikọtara ndị ahịa n'ụzọ ndị a na-atụghị anya ya, akara gị na-enweta isi obodo ma na-ewulite ihu ọma.
Uru Bara Uru Dị Egwu Maka Companylọ Ọrụ Gị
Na oge dijitalụ, ebe oke nhọrọ bụ ụkpụrụ, iwulite ndị siri ike nwere ike ịkọ na ịmata ya bụ ihe ịga nke ọma dị mkpa. Njikọ dị mma nke gị na ndị ahịa gị bụ ụzọ ị ga - esi zụlite nkekọ mmụọ, wulite ntụkwasị obi ma nwekwuo ntụkwasị obi. Nke a bụ otu ụzọ dị mma ụlọ ọrụ gị nwere ike isi mee.
N'ihi ihe okike ebumpụta ụwa ya, mgbasa ozi mmekọrịta bụ ebe magburu onwe ya ịmalite. Tọlite ​​usoro iji zaghachi mgbe niile mmekọrịta gị na ndị na-ege gị ntị, iwulite obodo pụrụ iche ma na-akwụghachi ụgwọ maka ndị ahịa gị dị ugbu a na nyochaa akara gị na mpụga nke ọwa gị nwere nhọrọ atọ ị ga-atụle.
Tags: ndị ahịandị ahịa mgbasa ozimgbasa ozi mgbasa ozinzaghachi mgbasa ozi
Thibaud Clement bụ onye isi ndị isi na ngalaba-guzobere Loomly. Kemgbe gụsịrị akwụkwọ na Grenoble Ecole de Management, France na Mahadum Ottawa, Canada laa azụ na 2011, Clement sooro nwunye ya na onye ọrụ azụmaahịa, Noemie rụkọọ ọrụ, na-ebupụta azụmahịa anọ na-aga nke ọma.